Gabdho isla dhashay oo markale u dhintay dhiig bax ka dib markii lagu sameeyay gudniinka daran – Bandhiga
Gabdho isla dhashay oo markale u dhintay dhiig bax ka dib markii lagu sameeyay gudniinka daran
Wararka naga soo gaaraya deegaanada Puntland gaar ahaan dhanka magaalada Gaalkacayo ayaa sheegaya in Labo gabdhood oo walaalo ah ay u geeriyoodeen dhiig bax ka dib markii lagu sameeyay gudniinka loo yaqaano jarjarida xubnaha gabdhaha.
Aasiya Cabdi Warsame oo 10 sano jir ahayd iyo walaasheed Khadiija oo 11 jir ahayd ayaa geeriyooday maaalin un kadib markii lagu guday xaafadda Arawda oo dhacda banaanka magaalada Gaalkacayo qeybteeda Puntland,
Falkana naxdinta leh ayaa dhacay 11-kii September, sida ay shabakadda wararka ee Caasimadda Online kuqortay boggeeda.
Ifraax Axmed oo u ololeysa xuquuqda haweenka ayaa wareysi ay siisay Bandhiga Media waxey sheegtay,
“Runtii waa arrin aad looga naxo in mar kale labo walaalo ah ay u geeriyoodaan dhiig bax uu sababay jarjarida xubnaha gabdhaha, waxaan ku boogaadinayaa maamulka Puntland in si deg deg ah uga hadlaan xaqiiqda arrintaan, aniga hadda waxaan safar gaaban ugu maqannahay dalka debeddiisa, marki aan soo laabtana dabagal ballaaran baan kusameeyn doonaa arrintaan”.
labada gabdhood ayaa la sheegay in ay u geeriyoodeen dhiig-bax 24 saac kadib markii la guday, waxaana ay dhinteen markii ay hooyadood u qaaday Isbitaal ku yaalada magaalada Gaalkacayo.
“Xanuunki geridii deeqa ayaa weli nahaayo, in mar kale aan laba walaalo geeridooda sabab unoqdo gudniinkaan waa dhibaato u baahan in wax laga qabto” ayey tiri Ifraax
Ifraax Ahmed ayaa sidoo kale BM ku wargelisay in ay la xiriirtay wakiila ufadhiya hay’adaha UNFPA iyo Save the Children ee ku suggan Galkacyo balse ay sheegeen in dhacdadaan aysan war ka haynin ayna lasoo wadaagi doonaan xaqiiqda dhabta ah.
Gudoomiyaha gobalka Mudug qeybta Puntland Xasan Maxamed Qalaf (Xasan Abgaaloow) oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan la xiriira gabdhaha walaalaha ah ee u dhintay Gudniinkan fircooniga ah, isagoo sheegay iney warbaahinta la wadaagi doonaan.